Uphahla kudivayisi yendlu
Upper walling ekhaya ophahleni. Nakuba isakhiwo - akuyona umsebenzi olula kangaka, kodwa uma wazi ophahleni iyunithi, ukuqonda izimiso zalo eziyisisekelo, kungenzeka nekuwusebentisa bebodwa.
Uphahla in umongo into efana ikhekhe egqinsiwe (endleleni, kubizwa - ukufulela ikhekhe) ne izingqimba alandelayo:
Zophahla ulwelwesi (amafilimu).
Cabanga idivayisi ophahleni ngaphezulu.
Lapho enza ukufakwa ophahleni uhlelo, ukuqala ukufakwa Batten. Kungaba isethwe isinyathelo ethize noma eqhubekayo, kuncike impahla. Ngokwesibonelo, okuqhubekayo purlin plywood efakwe uma eqondiswa ophahleni elithambile, futhi ukusetshenziswa ebhodini lukathayela, lathing metal noma Ondulina kudinga nokwanda kuka- 40-50 cm 20-25 mm ebhodini.
Crate kufanele ibe eziphephile kunangonyaka ipherimitha yendlu, ukwakha iphumele ophahleni, okukuvumela ekwakheni ukuvikelwa okungeziwe ngokubhekene ukushayela imvula.
Roof dormer paroizoliruyut wabhanselwa ungangenisi amanzi ungqimba uhlobo IZOSPAN, Yutafol njll Kuyisibopho umusi ukubiya ukuze 'cool' uphahla kungadingeki, kodwa ukwenza kube efiselekayo.
Roof ngci ekuvikeleni izinto ezifana Tile and Roll uhlobo, isibonelo, ursoy, Isover, Rockwool. ukwahlukanisa Uqashiwe kufanele kube eziqinile (okungenani 20-25 nowe), ukuzinza begazi, amanzi nemithi, imvelo - hhayi ukunikeza kamnandi kabi ezinobuthi.
Phakathi ukwahlukanisa kanye likhreyithi kumele anikezwe i ukujiya emoyeni ungqimba komyalelo wokungabi 5 cm, okuyinto kuyadingeka ukuze balondoloze zonke izakhiwo. It kontrobreshetki kudivayisi kuvimbela ukugcwaliswa umswakama ukwahlukanisa.
Idivayisi nophahla lwendlu inquma inqubo nokubeka eyohlangabeza notshwala imvula, okungukuthi, kusukela phansi kuze.
Ezintweni zokwakha uphahla eqoqwe ophahleni. Le nqubo azifane ukusebenza umklami zezingane. Ezintweni zokwakha uphahla, okuyinto zinemigodi yasibamba (fibre lukathayela usimende amashidi, metal, lukathayela) ifakwe ukufulela izinzipho ngaphansi umbala enamathela.
Bakhandwa okhandwe ngesando ku element Crest ucezu. Kulokhu, amanzi emvula angengene nail on the amabhodi lathing. Ngempumelelo isivikelo umswakama kwandisa iraba gasket ukuthi ibekwe ngaphansi inhloko isipikili.
Idivayisi ophahleni wenziwa ngokuvumelana uhlu elandelayo imisebenzi:
ukukala endaweni Ukusabalala;
izakhi snegouderzhivayuschie zixhunywe;
Namuhla inikeza ukukhetha okubanzi ezintweni zokwakha uphahla: slate, ama-tile, Izoplast, metal, Ondulin, profiled nabanye.
Muva nje yazuza okwandile kudivayisi udumo ophahleni metal, the ezihlukahlukene steel ishidi lashukumisa nge enamathela polymeric. Ngenxa ukuphrofayela kwakhona mbumbulu Tile zemvelo.
Metal has a isisindo kuqhathaniswa ukukhanya, kalula ukufakwa ihlukile, ukuphepha imvelo ukuphila service ngokwanele eside. Lokhu kwaziswa ivikelwe nge enamathela multilayer futhi kusukela umswakama, futhi kusukela namachibi phakathi imishini, ukuzisika, noma yikuphi ukulimala lokukhanda.
Nokho, metal kuyinto ngempela "enomsindo" - ke siyohlala njalo ezingqondweni emvuleni.
ophahleni iyunithi kumele kwenziwe ngokuvumelana nezimfuneko zokuphepha: azisebenzi yimvula enamandla noma umoya, nizihlanganise noJehova yokhalo ngangokunokwenzeka ukusebenzisa obandayo hardware, oVikelwe, njll
Sezingubo isixazululo ukhonkolo: kuyini nokuthi kungani uludinga
Slabs GOST, Ukucaciswa, incazelo, isicelo usimende-eziboshiwe kanye nokubuyekeza
Altai esifundeni: echibini kanye nencazelo yabo. Phumula, e-Altai
Amavithamini "Complivit". I-Analogs yezidakamizwa nezibuyekezo mayelana nabo
IBhodi Alekseya Mihaylovicha Tishayshego. Oda Imfihlo Wezindaba
Novosibirsk Waterpark "Munye onguMholi-Land" ukumema uphumule nomndeni wonke
Senza ekuhlaziyweni esizimele inkondlo Blok esithi "Isihambi"
200 ruble bill: kanjani ukuba ukhethe isithombe sakhe?